.fi - ဝီကီပီးဒီးယား
.fi သည် နိုင်ငံတော်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဓိက ဒိုမိန်းများထဲမှာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖင်လန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းကို ဖီကော်ရာ (Ficora) မှ ထိမ်းသိမ်းကိုင်တွယ်ခြင်းပြုသည်။ ဖီကော်ရာသည် ဖင်လန်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရသည့် နိုင်ငံတော်ပိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် တန်ပယ်ရယ်မြို့ရှိ Finnish Unix Users Group မှ နိုင်ငံပိုင် ဒိုမိန်းတစ်ခုရရှိရန် လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာများ လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် တန်ပယ်ရယ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် သို့ .fi ဒိုမိန်းအား အသုံးပြုခွင့် ချပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒိုမိန်းသည် FICIX ၏ ထိန်းသိမ်းမှု အောက်တွင် ရှိခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ ဖီကော်ရာ လက်အောက်တွင်ဖြစ်သည်။
ဖီကော်ရာသည် .fi ဒိုမိန်အား ဂရုစိုက်၍ စည်းကမ်းချက် များစွာဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်၊ ဒိုမိန်းလိပ်စာများကို ကုမ္ပဏီ နာမည်များ၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ အမှတ်အသားများ မှတ်ပုံတင်ထားမှသာလျင် အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင်လည်း ကုမ္ပဏီအများစုသည် .fi ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဒိုမိန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရန် မူတစ်ချို့ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် စကန်ဒီနေဗီးယား စာလုံးများဖြစ်သည့် (ä, å, ö) တို့ကို .fi ဒိုမိန်းလိပ်စာတွင် အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အဓိက ဒိုမိန်းလိပ်စာအဖြစ် အသုံးပြုရန် ဖီကော်ရာမှ အကြံမပြုခဲ့ပေ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် လူပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးတို့အား .fi ဒိုမိန်းကို ဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ သို့သော် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူ၍မရပေ၊ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီအမှတ်အသားများ၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီများမှသာလျင် .fi ဒိုမိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
.ax သည် အာလန် ကျွန်းပိုင် ဒိုးမိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
IANA .fi whois information
Ficora domains Archived 26 September 2006 at the Wayback Machine.
.fi top-level domain registration application
နိုင်ငံကုဒ် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒိုမိန်းများ
စီရယ်လ်အက္ခရာ အာရပ်အက္ခရာ ဗြဟ္မီအက္ခရာ တရုတ်စာလုံး အခြားအရေးအသား
.бг (bg, ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ)
.бел (bel, ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ)
.ею (eyu, ဥရောပသမဂ္ဂ)
.қаз (qaz, ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ)
.мон (mon, မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ)
.мкд (mkd, မြောက်မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ)
.рф (rf, ရုရှားနိုင်ငံ)
.срб (srb, ဆားဘီးယားနိုင်ငံ)
.укр (ukr, ယူကရိန်းနိုင်ငံ)
الجزائر. (al-Jazā’ir, အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ)
مصر. (Misr, အီဂျစ်နိုင်ငံ)
بھارت. (Bharat, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
ایران. (Irân, အီရန်နိုင်ငံ)
الاردن. (al-Urdun, ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ)
فلسطين. (Filastin, ပါလက်စတိုင်း)
پاکستان. (Pākistān, ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ)
السعودية. (al-Saudiah, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ)
سوريا. (Sūryā, ဆီးရီးယားနိုင်ငံ)
تونس. (Tunis, တူနီးရှားနိုင်ငံ)
عمان. (ʻUmān, အိုမန်နိုင်ငံ)
مليسيا. (Maleesya, မလေးရှားနိုင်ငံ)
المغرب. (al-Maġrib, မော်ရိုကိုနိုင်ငံ)
سودان. (Sūdān, ဆူဒန်နိုင်ငံ)
اليمن. (al-Yaman, ယီမင်နိုင်ငံ)
.ভাৰত (Bharôt, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.ভারত (Bharôt, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.भारत (Bharat, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.భారత్ (Bharat, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.ભારત (Bharat, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.ਭਾਰਤ (Bharat, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.ଭାରତ (Bhārata, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.இந்தியா (Inthiyaa, အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
.ລາວ (Lao, လာအိုနိုင်ငံ)
.சிங்கப்பூர் (Cinkappūr, စင်ကာပူနိုင်ငံ)
.ලංකා (Lanka, သိရီလင်္ကာနိုင်ငံ)
.இலங்கை (Ilangai, သိရီလင်္ကာနိုင်ငံ)
.ไทย (Thai, ထိုင်းနိုင်ငံ)
.中国 (Zhōngguó, တရုတ်နိုင်ငံ)
.中國 (Zhōngguó, တရုတ်နိုင်ငံ)
.香港 (Xiānggǎng/Hoeng1gong2, ဟောင်ကောင်)
.澳門 (Àomén/Ou3mun4, မကာအို)
.澳门 (Àomén/Ou3mun4, မကာအို)
.新加坡 (Xīnjiāpō, စင်ကာပူနိုင်ငံ)
.台灣 (Táiwān, ထိုင်ဝမ်)
.台湾 (Táiwān, ထိုင်ဝမ်)
.հայ (hay, အာမေးနီးယားနိုင်ငံ)
.ευ (ey, ဥရောပသမဂ္ဂ)
.გე (ge, ဂျော်ဂျီယာ)
.ελ (el, ဂရိနိုင်ငံ)
.한국 (Han-guk, တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံ)
.ישראל‎ (Yisrael, အစ္စရေးနိုင်ငံ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=.fi&oldid=748422" မှ ရယူရန်
ဟီဘရူးဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။